7PH Sarin-doko sarobidy ho an'ny tavoahangin'ny rivodoza China Manufacturer
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an&#39;ny mpanodina Wind Turbines > 7PH Sarin-doko sarobidy ho an&#39;ny tavoahangin&#39;ny rivodoza
Ny Cooling Solutions tena lafatra ny tsy fahampian'ny simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehanana hafanana hafanana hafanana.
Ny fitaovana fitsangatsanganana dia mitaky bozaka fanamafisana, Ny server dia azo amina toerana ambony ao anaty boaty fanadiovana, Manosika ny tsiranoka maintin'ny maintin'ny sera amin'ny coolant. Ny hafanana hafanana dia miteraka hafanana rehefa mandeha ny server, toy ny: CPU (TUWF-47 dia 47 ° C), avy hatrany dia tonga manofa ka manodina avy hatrany amin'ny ranom-boasary, ary manalany ny hafanana amin'ny rivotra. ny rivotra matevina ary miverina ao anaty rano mba hiverina any amin'ny rano fanondrahana; Fanaraha-maso - fampangatsiahana - fanamafisana - Mialà eo alohaloha, noho izany dia tsy miovaova ny rafitra fantsonan'ny serivera amin'ny teboka manify amin'ny 47 ° C, Ny server ihany koa dia maharitra amin'ny 47 ° C.
* Fluorocarbon Cooling Medium Ny tsy fahampian'ny simika tsara indrindra dia mety ho azo ampiasaina amin'ny fotoana samihafa amin'ny famoahana hafanana hafanana;
* Ny fluorine Cooling Point sifotra ambany dia mora. Misy ny fiverimberenana eo am-panaovana asa, izay manalavitra ny hafanana amin'ny fiverimberenana, hany ka miantoka tsara sy miorina tsara ny fizotran'ny hafanana;
* Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina tsiranoka tsy misy enti-mampidi-doza, tsy levona ary tsy misy fipoahana, tsy misy afo sy teboka tselatra;
* Fiarovana elektrika tsara, fiakarana avo lozam-pifamoivoizana mihoatra ny 40KV;
* Kofehy ho an'ny tavoahangin-dranomamy ny rivotra tsara dia tsara, manjelanjelatra ambany kokoa noho ny rano madio; Afaka mikoriana tsara ary manaparitaka hafanana amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fakan-tsary;
* Vahaolana amin'ny solika tsy misy poizina, tsy mampidi-doza, tsy mampatahotra;
* Eco Friendly Coolants ny tontolo iainana ara-tontolo iainana, dia manana ny ODP ny 0 ary ny ambany ambany GWP ambany
Solon-drivotra maivana ho an'ny mpamokatra tavoahangin'ny rivodoza Contact Now
Fluorocarbon Cooling Medium ho an'ny tavoahangin'ny rivodoza Contact Now
Dielectric Coating for Wind Turbines Dielectric Coating for Turbines Dielectric Coating for Generator